Milkiilaha Alibaba, Jack Ma, oo Kigali Imaan Doona Bisha Soo Socota
“Jack Ma waxaa u qorsheysan in uu yimaado Rwanda si uu xirfadahiisa hal abuurnimo ula wadaago dhallinyaradeenna. Waxaan xiriir la sameynay Alibaba Group waxaana fileynaa in bisha soo socoto uu yimaado Kigali kana soo qeyb galo YouthConnekt Africa Summit” ayuu yiri Jean Philbert Nsengimana oo ah Wasiirka Dhallinyarada iyo ICT-da.
Wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in aasaasaha ahna milkiilaha Alibaba Group la filayo in uu gaaro Rwanda bisha soo socoto.
Jack Ma waa ninka ugu hantida badan dalka Shiinaha, waxaa kale oo uu kamid yahay 10-ka qof ee ugu hantida badan dunida waqti xaadirkan.
Hantiilaha iska leh mid kamid ah shirkadaha ugu weyn dunida ee internet-ka wax ku iibisa ayaa la kulmi doono dhallinyarada Afrika bisha soo socoto isaga oo kala hadli doono hal-abuurka iyo fursadaha ganacsi ee Qaaradda ka jira.
Madasha oo lagu magacaabo ‘Madasha-Isku-Xerka Dhallinyarada Afrika’ ayaa waxaa kasoo qeyb gali doono madax dowladeedyo, hal-abuureyaal, maalgeliyeyaal, shirkado waaweyn iyo shirkado yar yar waxa ayna ka wada hadli doonaan sida lagu hormarin karo ganacsiga la xiriira tiknoolojiyada iyo dhaqaalaha Qaaradda loo hormarin lahaa iyada oo hal-abuurka ganacsi ee dhallinyarada la dhiirrogelinayo.
YouthConnektAfrica-Isku-Xerka-Dhallinyarta Afrika waxaa soo qaban qaban qaabiya Rwanda, UNCTAD iyo UNDP.